Sanduuqa McKnight Endowment Fund for Neuroscience wuxuu taageeraa cilmi -baaris cusub oo loogu talagalay inay sayniska u dhawaato maalinta cudurrada maskaxda si sax ah loo ogaan karo, looga hortagi karo, loona daweyn karo. Si taas loo gaaro, Sanduuqa Dhaqaalaha ee McKnight ee Neuroscience wuxuu casuumayaa waraaqo ujeeddo leh 2022 McKnight Innovations Technological Innovations in Neuroscience.
Codsadayaasha Abaalmarinta Tech McKnight waa inay noqdaan baarayaal madaxbannaan oo ka shaqeeya hay'adaha cilmi-baarista ee aan macaash doonka ahayn ee Mareykanka, waana inay qabtaan jagada macallimiinta darajada Kaaliyaha Professor ama ka sareeya. Kuwa haysta magacyo kale sida Professor -ka Cilmi -baarista, Professor -ku -Xirfadeeye, Track -ga Cilmi -baarista ee Professor, Booqashada Borofisar ama Macallin ma u qalmaan. Haddii hay'adda martida loo yahay aysan isticmaalin magacyo aqoonsiyeed, warqad ka timid sarkaal sare oo hay'ad (tusaale Dean ama Agaasimaha Cilmi -baarista) waa inay xaqiijisaa in codsaduhu haysto agab/hay'ad gaar ah oo u gooni ah, meel shaybaar, iyo/ama tas -hiilaad. Waxaan danaynaynaa juqraafi, jinsi, iyo kala duwanaanshaha jinsiyadda, waxaanan ku dhiirri -gelinaynaa haweenka iyo bulshooyinka midabka leh inay codsadaan. Lacagaha waxaa loo isticmaali karaa hawlo cilmi -baaris oo kala duwan, laakiin ma aha mushaharka qaataha. Ilaha kale ee musharraxa ayaa la tixgelin doonaa marka la dooranayo abaalmarinta. Musharraxu ma qaban karo abaalmarin kale oo ka timaada Sanduuqa Maaliyadda ee McKnight ee Neuroscience oo isku soo beegmi doonta waqtiga Abaalmarinta Farsamada ee Neuroscience.
Waxaa jira hannaan xulasho oo laba marxaladood ah, oo ka bilaabma xarafka ujeeddada (LOI). Guddiga xulashada ayaa dib -u -eegi doona LOI -yada waxayna ku casuumi doonaan dhowr codsade si ay u soo gudbiyaan soo jeedinno dhammaystiran kuwaas oo lagu qiimeyn doono iyada oo ku saleysan hal -abuurka, faa'iidada suurtagalka ah ee habka cusub, iyo ahmiyadda dhibaatooyinka la xallinayo. Illaa saddex abaalmarin ayaa la bixiyaa sannad kasta, mid walbana wuxuu bixiyaa $100,000 sanadkii laba sano. LOIs waxay ku egtahay 6 -da Diseembar, 2021 (saqda dhexe ee aagga waqtiga ugu dambeeya ee dhulka). Soo jeedinta buuxda waxay noqon doontaa Abriil 25, 2022, maalgalintuna waxay bilaabmaysaa 1da Ogosto, 2022.